Inkundla entsha yempi yamaqembu amakhulu eMzansi | Scrolla Izindaba
Inkundla entsha yempi yamaqembu amakhulu eMzansi
Amaqembu ezombusazwe aseNingizimu Afrika azoguqula imisipha yawo futhi avivinye amasu awo okhetho ngamawadi angama-96 azothatha izintambo okhethweni lokuchibiyela oluzayo lohulumeni basekhaya mhla ziyi-11 kuLwezi.
Abaholi be-DA uJohn Steenhuisen noHelen Zille bagembula ngesabelo sabo sabantu abamnyama abaphakathi – njengoba bedlulisela iqembu ngakwesokudla ukuheha abavoti abamhlophe abasadla ngoludala.
Leli qembu lihlokoma ngenhloso yokufukula abantu abamnyama kwezomnotho (i-BEE) neminye imithetho yokuqashwa kwabantu ngokulinganayo (i-EE) eyenzelwe ukudala amathuba emaqenjini ayencishwe amathuba phambilini.
USteenhuisen uzame ukuguqula lo mlayezo ukuze angalahlekelwa abavoti abaningi abamnyama, kepha kuze kube yimanje uyehluleka ukukwenza lokho. Uphakamise nokuthi i-DA izonikela “ngamandla kubantu”
I-Economic Freedom Fighters (EFF) kaJulius Malema izoba nethuba lokuzibonakalisa njengabaphathi bamandla komasipala abaxhonyiwe.
Futhi ukhetho lokuchibiyela lunikeza uMengameli Cyril Ramaphosa ithuba lokuthi abeke isitembu sakhe ezingeni lomasipala.
Iningi lomasipala abaphethwe yi-ANC basaphethwe yizimeya ezisekela uJacob Zuma ezisiza ikhempu kaZuma ukuthi ihlale ifanele empini eqhubekayo ye-ANC.
Kule mpelasonto, izikhulu ze-ANC kubalwa uNobhala Jikelele weqembu uAce Magashule, iPhini likaNobhala Jikelele uJessie Duarte – kanye namalungu ekomidi eliphezulu kuzwelonke uSenzo Mchunu, David Masondo noBheki Cele – bonke bangene emkhankasweni wokukhankasa ezifundazweni ezahlukene.
Umthombo wesithombe: @MyANC. Okhulumela i-ANC uPule Mabe uheha abavoti ngezikibha zeqembu kwiwadi lesine eMasipala wasePhongolo eNyakatho neKwaZulu-Natali.